“Tamin’izay aho vao mba tena nahatsapa hoe sambatra.”
TIA nanao ady totohondry i Hilton. Vao fito taona izy, dia efa zatra an’izany, na teny ambony ringa, na tamin’ny fiainana andavanandro. Tamin’izy teny amin’ny lise, dia fanaony ny nifampitaritarika tamin’ny namany mba hila ady aman’olona fotsiny. Hoy izy: “Nangalatra aho sady niloka, nijery sary vetaveta, nampijaly vehivavy, ary nanompa ray aman-dreny. Naditra be aho tamin’izany, ka nihevitra ny ray aman-dreniko fa tsy ho avotra intsony aho. Niala tao an-trano aho rehefa vita ny fianarako teny amin’ny lise.”
Nody ihany i Hilton, 12 taona tatỳ aoriana. Saika tsy nino ny ray aman-dreniny rehefa nahita azy. Niova be mantsy izy, ka lasa manaja olona, tsy mora tezitra sady tsara fanahy. Fa dia inona loatra no nitranga? Nisaintsaina ny fiainany izy rehefa lasa tany lavitra tany. Nandinika ny Baiboly koa izy, sao mba afaka manova azy izany. Hoy izy: “Nampihariko izay nianarako tao amin’ny Baiboly. Niezaka àry aho mba hiala tamin’ny toetra ratsiko sy hampihatra ny Efesianina 6:2, 3 hoe: ‘Hajao ny rainao sy ny reninao.’ Tamin’izay aho vao mba tena nahatsapa hoe sambatra! Tamin’izay koa vao tsapako hoe nampifaly ny ray aman-dreniko ny zavatra nataoko fa tsy nankarary fo azy ireo.”
Hita amin’ny tantaran’i Hilton fa tena mbola mandaitra ny torohevitry ny Baiboly sady afaka manova olona. (Hebreo 4:12) Andao àry handinika toetra tsara sasany ampianarin’ny Baiboly, toy ny hoe manao ny marina, tsy mora tezitra, tsy mivadika amin’ny vady, ary maneho fitiavana. Ho hitanao fa tena mahasoa ireo rehefa ampiharina.
EFA LANY ANDRO VE?
Misy milaza fa lany andro ny Baiboly, hoatr’ireny kasety na telefaonina na ordinatera tranainy be ireny. Ilaina foana anefa ny Baiboly satria manampy ny olona ho tsara toetra. Ny fitaovana elektronika mantsy no mety lany andro sady miova foana, fa ny toetra mampiavaka ny olombelona kosa tsy miova mihitsy. Na ny olona taloha na ny amin’izao, ohatra, samy tia olona tsara fanahy, be fitiavana, tsy mivadika amin’ny vadiny. Azo antoka kosa fa tsy tiany ny olona masiaka, ratsy toetra, ary manitsakitsa-bady. Raha ny toetra mampiavaka ny olona àry no jerena, dia “tsy misy zava-baovao etỳ ambanin’ny masoandro.”—Mpitoriteny 1:9.
Hizara Hizara Mbola Mandaitra ve ny Torohevitry ny Baiboly?